Dredge nampiasaina mba hitazomana ny renirano Jhelum & hisorohana ny tondra-drano ao Kashmir
Rehefa afaka 50 taona mahery, ny dredge marika Ellicott® tany am-boalohany ho an'ny dredge fiarovana Jhelum dia miasa miaraka amin'ny maodely ankehitriny.
Source: Greater Kashmir nataon'i Arif Shafi Wani
'Nampitombo ny fahafahan'ny ony mivoaka ny renirano'
Srinagar, 16 Sep: Tetikasa fatra-paniry tombo-kase hamonjy ny reniranon'i Jashum velona Kashmir dia nanomboka nitondra valiny tsara satria ny governemanta Jammu sy Kashmir dia nitazona fa ny tondra-drano nateraky ny orana tsy nitsahatra tato ho ato dia nihena noho ny fepetra fitahirizana ny renirano any avaratr'i Kashmir.
Jhelum izay loharanon'ny nanondrahana ny lohasaha dia potiky ny halatra be tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay. Raha tsy misy fepetra arovana, dia very ny fahitana ny renirano ary nahatonga ny fanakanana ny fantsom-pivoahany miraoka any Baramulla, ary mety hiteraka tondra-drano any amin'ny Lohasahan-driaka izany.
Taorian'ny ampitson'ny fanemorana naharitra an-taonany, ny tetikasa Jhelum Conservation dia natolotry ny Minisitry ny Minisitra, Omar Abdullah, avy any avaratry Kashmir's Baramulla tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Nahazo fampiroboroboana be ny ezaka fanaraha-maso taorian'ny nahazoan'ny fanjakana ny fanodinana droa misy mpanavao trano roa natao tany Etazonia mba hanatanterahana fandotoana.
Mianara bebe kokoa momba ny famonosana renirano
“Ny asa fitehirizana ny fiarovana hatrany ao amin'ny Jhelum ao amin'ny distrikan'i Baramulla dia nahomby satria afaka niatrika fandrahonana tondra-drano tato ho ato izahay. Tamin'ny fitrandrahana tsy an-kijanona dia nesorinay ny sakana tao amin'ny renirano tao Baramulla ary nampitombo ny fivoahan'ny ony, "hoy i Taj Mohi-ud-Din, minisitry ny fanondrahana sy ny fanaraha-maso ny tondra-drano tamin'i Greater Kashmir.
Avy amin'i Verinag any atsimon'i Kashmir, i Jhelum dia misy renirano efatra, Surendran, Brang, Arapath ary Lidder ao amin'ny distrikan'i Islamabad (Anantnag) atsimon'i Kashmir. Ankoatr'izay, ny renirano kely toa an'i Veshara sy Rambiara dia manome sakafo rano madio ihany koa ny renirano.
Jhelum meanders amin'ny alàlan'ny bibilava avy any atsimo ka hatrany Kashmir Avaratra ary mipaka any Wullar, farihy rano velona lehibe indrindra any Azia, alohan'ny handrotsahana azy any Pakistan dia nitantana an'i Kashmir tamin'ny alàlan'i Baramulla. Nilaza ny manam-pahaizana fa ny tondra-drano mahatsiravina tamin'ny 1959 dia niteraka voka-dratsin'ny ranomasina tany Jhelum noho ny fidinana ambany avy any amin'ny Farihy Wullar any avaratr'i Kashmir izay efa saika tototry ny fanangonan-karena ny fantson-tsolika sy tery fivoahana tery.
“Nalainay ny silt taonina tao amin'ny fantsom-pivoarana. Ny Projet Jhelum Conservation dia mizaka tena satria ny fivarotana ilay silt dia nahazo ny governemanta tamin'ny crore crore roa tao anatin'ny volana vitsivitsy. Hampiasainay amin'ny fiarovana maharitra ny renirano io vola io, "hoy i Taj fa nanampy ny roa amin'ireo dredger amerikana nanafaingana ny fizotry ny fiarovana azy ireo.
Ireo dredger dia novokarin'i Ellicott Dredges, monina any Etazonia - iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana dredging tranainy indrindra. Raha ny tokony ho izy, Ellicott Dredges no namatsy ny dredger marika Ellicott® voalohany ho fiarovana ny Jhelum tamin'ny taona 1960. Ny dredger dia ny praiminisitra Jawahar Lal Nehru no namoaka izany.
Namboarina tamin'ny saran'ny crores Rs 12, ny dredger antsoina hoe Soya II sy Budshah II dia natao hanatontosana voly lalina. Aijaz Rasool, solontenan'i KEC Mumbai, Ellicott Dredges any India, dia nilaza fa tsy mitsahatra ny fanaovan-drongony ao Janbazpora sy Juhama any Baramulla.
“Amin'ny fitrandrahana dradradradra maharitra any amin'ireo toerana ireo dia afaka miala amin'ny tondra-drano naharitra zato taona ao an-dohasaha isika. Saingy tsy nisy izany raha tsy teo ny «dredger», hoy ihany izy.
Nilaza ny tompon'andraikitra fa ny praiminisitra Jammu sy Kashmir Bakshi Ghulam Muhammad tamin'ny faramparan'ny taona 50 dia nanatona ny Governemanta India mba hitady torohevitra sy vahaolana momba ny injeniera momba io olana io. Eo ambany fitarihan'ny manam-pahaizana manokana momba ny komisiona momba ny rano dia namboarina ny drafitra lehibe iray momba ny asa fitrandrahana Jhelum avy any Wullar ka hatrany Khadanyar.
Ny tetikasa dia nanombatombana ny fanalehibeazana an'i Jhelum avy ao Ningli mankany Sheeri tamin'ny alàlan'ny dredger mekanika. Na izany aza, tamin'io fotoana io dia tsy namboarina na mora vidy tany India ny dredger. Nilaza ny tompon'andraikitra fa noho ny fidirana an-tsehatra manokana ny praiminisitra Jawahar Lal Nehru tamin'izany no novidiana ny dredger.
“Na izany aza, dia nitohy hatramin'ny 1986. ny fampiasan-dredging dia natsahatra noho ny tsy fahampian'ny loharanon-karena sy ny toerana fanamboarana. Nanomboka tamin'izay dia nisy famotsoran-keloka an-taonina maro niseho tao Jhelum noho ny fahasimbana haingana ny fihinanany. Izany dia nampihena ny fahombiazan'ny fitateran'ny tondra-drano an'ny fantsom-pivoakan'i Jhelum ary ny fahaizany mitondra 35000 cusecs tamin'ny 1975 ka hatramin'ny 20000 cusecs ankehitriny, "hoy ny tompon'andraikitra.
Ny sampan-draharaha misahana ny fanondrahana rano sy ny safo-drano dia tamin'ny taona 2009 dia nandefa tetikasa crore 2000 ho an'ny minisiteran'ny loharanon-drano mba hahazo sazy. Ny tetikasa dia nahitana asa famerenana amin'ny laoniny maro, ao anatin'izany ny fanatsarana ny fitrandrahana fantsona misy an'i Jhelum, ny fiarovana, ny asa fanoherana ny fikaohon-tany ary ny fampitomboana ny fahombiazan'ny hydraulic.
Na izany aza, ny minisitera dia nankatoavin'ny ampahany amin'ny tetik'asa mitentina Rore 97 crores hanamorana ny fidirana an-tsehatra avy hatrany ao anatin'izany ny fividianana masinina sy ny fitrandrahana rano any Jhelum, indrindra ireo fantsakan'ny tondra-drano any Srinagar sy ny ony any Daubgah sy Ningli any Baramulla. Nilaza i Taj fa ny angon-drakitra rehetra mikasika ny fikajiana sy ny haavon'ny rano ivelan'ny rano, ny fandrefesana ny tondra-drano ary ny fahaizan'i Jhelum nitondra tao anatin'ny 50 taona lasa dia niomerika.
“Nandray ny fitrandrahana ireo fantson-drano mitobaka any Srinagar sy ireo faritra mifanila aminy ankoatran'ny nandefasana ny fivezivezena avy any Sonwar mankany Old City. Rehefa vita ny dredging dia mikasa ihany koa izahay ny hanala ireo fidirana an-tsokosoko rehetra amoron'ny renirano avy any Islamabad ka hatrany Baramulla. Afaka taona vitsivitsy dia haverina amin'ny hatsarany madio i Jhelum, "hoy i Taj nanampy.
Navoaka tao amin'ny Greater Kashmir